Ra’iisul wasaare Cumar oo fariin u diray madaxda cusub ee Hirshabeelle. – Radio Daljir
Ra’iisul wasaare Cumar oo fariin u diray madaxda cusub ee Hirshabeelle.
Oktoobar 18, 2016 12:20 b 0
Garoowe, Oct 18 2016–Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka dhacdey magaalada Jowhar ee lagu doortay Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeele Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble iyo madaxweyne ku xigeenka Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe).
“Waxaan u hambalyaynayaa Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeele Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble iyo ku xigeenkiisa Waxaan Alle uga baryaynaa in uu howsha adag ee loo doortay ku garab galo”.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay doorashada u dhacday, oo ah mid xaq ah iyo si xalaal ku dhacday, bulshadana ay la shaqeeyaan hogaanka cusub” ayuu yiri R.W Cumar.
DHEGEYSO-Xasan Sheekh*Galkacyo waxay ahayd meelaan lagu hoyan Galmudug kahor*.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida iyo M CC Kooshin.